Editor, Author at XYZ NEWS - Page 67 of 117
လေယာဉ်လိုင်းတွေအားလုံးရဲ့ထိုင်ခုံအရောင်ကိုသင်သတိထားမိပါသလား? အမြဲတမ်းနီးပါးအပြာရောင်ဖြစ်နေတတ်ပီး သူနဲ့ပတ်သတ်လို့ခြွင်းချက်လေးတွေရှိပါတယ်။ အချို့လူတွေကတော့ ဒီအရောင်ဖြစ်နေရတာဟာ ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကြီးကြီးကအပြာရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပေးချင်လို့လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါမဲ့ ရှင်းလင်းချက်ကအဲ့လောက်မရိုးရှင်းပါဘူး။ ဒါဆိုသူတို့ကဘာလို့အပြာရောင်ဖြစ်နေရတာလဲ? ပထမဆုံးသောအပြာရောင်ထိုင်ခုံတွေဟာ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကရှိခဲ့တာဖြစ်ပီး အခုဆိုရင်လဲ လေကြောင်းလိုင်းအားလုံးနီးပါးဟာ အဲ့အရောင်ကိုပဲဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေအရဆိုရင်တော့ လူအတော်များများဟာ အပြာရောင်ကို ယုံကြည်ရမှုစိတ်ချရမှု၊ ဘေးကင်းရမှု စတာတွေနဲ့တွဲလျက်မြင်တတ်ကြပါတယ်တဲ့။ …
ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမယ့် အိမ်မက်ကိုဖြစ်အောင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး
တရုတ်နိုင်ငံကဘက်စကတ်ဘောကောင်မလေးရဲ့ဇာတ်လမ်းကမဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့သက်သေပါပဲ..။ မဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိပါဘူး။အချိန်တိုင်းမှာမျှော်လင့်ချက်မဲ့တယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဘဝဆိုတာကကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတာပါ။သင့်ဘဝမှာတခုခုကိုအရှံးပေးချင်တဲ့အခိုက်အတန့်ကြုံလာပြီဆိုရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံကကွမ်ဟွန်ယန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုဖတ်လိုက်ပါ။ ကွမ်ဟန်ယန်ဆိုတဲ့အသက်၂၀အရွယ်ရှိတဲ့ကောင်မလေးကသူမရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းနဲ့အင်တာနက်ကိုဂယက်ရိုက်စေခဲ့တဲ့သူပါ။အသက်၂၀အရွယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံမှာနေရင်းအရှိန်ပြင်းပြင်းမောင်းလာတဲ့ကုန်တင်ကားနဲ့တိုက်မိခဲ့ပြီးခြေထောက်တွေကိုဖြတ်ခဲ့ရတာပါ။သူမရဲ့မိသားစုကတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းယန်မန်ဆိုတဲ့ကျေးလက်ဒေသမှာနေတာဖြစ်လို့ခြေတုတပ်ဖို့မတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူမရဲ့သွားလာမှုအဆင်ပြေဖို့တဝက်ကိုဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။ကွမ်းကသစ်သားတုံးနဲ့လက်ရဲ့အကူအညီကိုသုံးပြီးသွားလာရပါတယ်။ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့အခြေအနေကြောင့်သူမကိုဘက်စကတ်ဘောကောင်မလေးလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ၂၀၀၅ခုနှစ်အသက်၁၀နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကွမ်ကလူမှုကွန်ယက်တွေမှာသူမဓာတ်ပုံတွေကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားတော်တော်များများနဲ့တရုတ်လူမျိုးအများစုကလဲသူမရဲ့ကြိုးစားမှုကိုသတိပြုမိလာပါတယ်။အဲဒီနောက်ပေကျင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးအဖွဲ့ကခြေတုတွေတပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပိုကြီးတဲ့ခြေတုကိုတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာရခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့မိသားစုကဆင်းရဲလို့နောက်ထပ်ကုသမှုတွေမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။အရှူံးပေးဖို့မတွေးဘဲကွမ်ကသူမရဲ့ဘဝကိုရှေ့ဆက်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်။သတ္တိရှိတဲ့ကောင်မလေးကတွေးလို့တောင်မရတဲ့ပယမသန်စွမ်းများအတွက်ရေကူးအသင်းကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကယန်နမ်ကမသန်စွမ်းသူများအတွက်ပထမဆုံးထောင်ပေးတဲ့အဖွဲ့ပါ။အစပိုင်းမှာတော့ရေကူးဖို့သူမအတော်အခက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်မှာသူမကိုတရုတ်နေ့စဉ်သတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မအသက်ရှူမဝလို့ရေကူးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမယ့်ကွမ့်ရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းမှုကအောင်မြင်တဲ့အားကစားသမားဖြစ်ဖို့အတားအဆီးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူမကအနာဂတ်မှာပါရာအိုလံပစ်ဂိမ်းကိုဝင်ပြိုင်ဖို့တနေ့ကို၄နာရီလေ့ကျင့်နေတာပါ။ ဒီလိုပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ဆိုတာသူမရဲ့ငယ်ငယ်ထဲကမက်ခဲ့အိမ်မက်လို့ဆိုပါတယ်။ အခုတော့ ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမယ့် သူမအိမ်မက်တွေထဲကအတိုင်းတတယ်ဖြစ်လာပါပြီ။ လူတွေကမသန်စွမ်းတွေကိုမြင်ရင်ပိုက်ဆံလိုချင်လို့လာတဲ့သူတောင်းစားတွေလိုပဲထင်ကြပါတယ်။အခုလိုမသန်စွမ်းရေကူးသမားတွေကိုမြင်ရင်သူတို့လဲဘယ်လောက်ရုန်းကန်ကြလဲဆိုတာသိရမှပါလို့ပြောပါတယ်။သူမရဲ့အောင်မြင်မှုကအခုဆိုကွမ့်ကိုတရုတ်မှာနာမည်ကြီးတယောက်ဖြစ်စေနေပါပြီ။အဲဒါအပြင်ကမ္ဘာကိုလဲအတွေးအမြင်သစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Writer -Min Thu ( XYZ )